जेबी टुहुरेको उपचार गर्न आ’र्थिक स’मस्या ! – Nepal Online Khabar
भाद्र ७, २०७८ सोमबार 214
काठमाडौं : अस्पताल भर्ना भएका जनगायक जेबी टुहुरेको अवस्था गम्भीर हुँदै गएको छ । गत मंगलबार अचानक म’स्तिष्कघात भएपछि उनलाई बल्खुस्थित बयोधा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । टुहुरेको अहिले सोही अस्पतालको सिसियू उपचार भइरहेको छ ।
७८ वर्षीय टुहुरे मुटु, फोक्सो, मधुमेह र उच्च रक्तचापका दीर्घरोगी थिए । उनको शल्यक्रिया जो’खिमपूर्ण भएको भन्दै चिकित्सकहरुले औषधिका माध्यमबाट उपचार गरिरहेका छन् । टुहुरेको स्वास्थ्य अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार आउन नसकेको उनको उपचारमा संलग्न वरिष्ठ न्यूरोलोजिस्ट डा. सामर्थ सिंहले जानकारी दिएका छन् ।
अस्पताल भर्ना भएपछि टुहुरेलाई भेट्न पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले महासचिव
ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, पूर्वमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायतका नेता पुगेका छन ।
भेट्न गएका मध्ये प्रचण्डले टुहुरेको सम्प्रर्ण उपचार खर्च ब्यहोर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने बताएका छन् ।टुहुरेको उपचारमा आर्थिक अभाव भएको उनको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ । टुहुरेले झण्डै २ सय जनवादी गीत गाएका छन् ।
Prevकेजिएफ : च्याप्टर- २ को रि’लिज डेट तोकियो !
Nextमुलुकभर थप १८०१ जनामा को’रोना पुष्टि, २४ जनाको मृ’त्यु !